भाजपा सरकारको नीतिको समालोचन गर्दै मुख्यमन्त्री चामलिङले भने केन्द्रले पुरस्कृत गर्नको सट्टा सिक्किमलाई शास्ति दिएको छ - खबरम्यागजिन
Homeमुख्य समाचारभाजपा सरकारको नीतिको समालोचन गर्दै मुख्यमन्त्री चामलिङले भने केन्द्रले पुरस्कृत गर्नको सट्टा सिक्किमलाई शास्ति दिएको छ
पछिल्लो पाँच वर्षमा प्रधानमन्त्री दुईपल्ट सिक्किम आए। मैले पाकिममा लिम्बू-तामाङको सीट, जनजातिको मुद्दा र राज्यका ज्वलन्त समस्याहरू राखे। प्रधानमन्त्रीले त्यसबारे एउटै शब्द बोलेनन्। त्यसअघि, जनवरी, 2016 मा मैले चिन्तन भवनमा 45 हजार करोड़को आर्थिक गुच्छको आवश्यकता प्रधानमन्त्रीसमक्ष राखेको थिएँ, तर त्यहाँ पनि उनी बोलेनन्। 11 जातगोष्ठीको मुद्दा, लिम्बू-तामाङको सीट आरक्षण, कर्मापाको मुद्दा आदि विषयमा मैले कुरा राख्दा उनले केही भनेनन्। सानो राज्यले यत्रो ठूलो देशसँग ‘पोलिटिकल डिल’ गर्नु सजिलो छैन। 545 जनामा हाम्रा एकमात्र सांसद छन्। राज्यसभामा पनि एकजना छन्। राष्ट्रिय स्तरमा हाम्रो उपस्थिति छैन।
गान्तोक, 28 दिसम्बरः सिक्किमले लामो समयदेखि केन्द्र सरकारको कोल्टे नीतिको मार झेल्दै आएको भए पनि धैर्यको सीमाना नाघिहालेको थिएन। तर अहिले आएर केन्द्र सरकारको सिक्किम नीतिप्रति मुख्यमन्त्री पवन चामलिङले प्रतिक्रिया व्यक्त गरेका छन्। सिक्किमको प्रगति हेरेर केन्द्र सरकारले राज्यलाई पुरस्कृत गर्नु पर्नेमा आर्थिक शास्ति दिएको मुख्यमन्त्री पवन चामलिङले बताएका छन्। सिक्किम देशकै एक ऊर्ध्वगामी राज्य हुँदाहुँदै सिक्किमलाई दिइने केन्द्रिय आर्थिक सहायता घटाएर सिक्किममाथि केन्द्रले अन्याय गरेको मुख्यमन्त्रीले मन्तव्य गरेका हुन्। एसडीएफ सरकार स्थापनाको 24 औं वर्ष परिपूर्तिको अवसरमा सरमसामा आयोजित एक सरकारी समारोहमा उनी प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वाधीन एनडीए सरकारप्रति रुष्टता प्रकट गरिरहेका थिए।
“सिक्किमका धेरै काम केन्द्रबाट भएको छैन। 14औं वित्तीय आयोगबाट सिक्किमले अत्यन्तै कम अनुदान पाएको छ। सिक्किमको वृद्धिदर देखेर राज्यको अनुदान कम गर्नु गलत निर्णय हो। पछिल्लो पाँच वर्षमा हामीले अनुदान कम भएकोले 10 हजार करोड़को नोक्सान खपेका छौं। हाम्रो देशमा राम्रो काम गर्दा पुरस्कार नपाएर दण्ड पाइन्छ। स्याबासी दिएर अझ प्रोत्साहन गर्नको सट्टा सहयोग नै रोकिन्छ”,भाजपा सरकारप्रति एसडीएफ पार्टीको बढ्दो विरोधाभास मुख्यमन्त्रीको भाषणमा स्पष्ट परिलक्षित थियो। “पछिल्लो पाँच वर्षमा प्रधानमन्त्री दुईपल्ट सिक्किम आए। मैले पाकिममा लिम्बू-तामाङको सीट, जनजातिको मुद्दा र राज्यका ज्वलन्त समस्याहरू राखे। प्रधानमन्त्रीले त्यसबारे एउटै शब्द बोलेनन्। त्यसअघि, जनवरी, 2016 मा मैले चिन्तन भवनमा 45 हजार करोड़को आर्थिक गुच्छको आवश्यकता प्रधानमन्त्रीसमक्ष राखेको थिएँ, तर त्यहाँ पनि उनी बोलेनन्। 11 जातगोष्ठीको मुद्दा, लिम्बू-तामाङको सीट आरक्षण, कर्मापाको मुद्दा आदि विषयमा मैले कुरा राख्दा उनले केही भनेनन्। सानो राज्यले यत्रो ठूलो देशसँग ‘पोलिटिकल डिल’ गर्नु सजिलो छैन। 545 जनामा हाम्रा एकमात्र सांसद छन्। राज्यसभामा पनि एकजना छन्। राष्ट्रिय स्तरमा हाम्रो उपस्थिति छैन। यस्तो अवस्थामा सिक्किमलाई यहाँसम्म ल्याउनु, यसप्रकारको विकास गर्नु, उज्ज्वल राज्य बनाउनु, सिक्किमका जनताको निम्नतम माग पूरा गर्नु सजिलो काम छैन”,मुख्यमन्त्री पवन चामलिङले आफ्नो सम्बोधनमा भने। संविधानमा जति नै सङ्घीय संरचनाको कुरा भए पनि राज्यको व्यावहारिक मान्यता केन्द्रबाट नभएको उनको गुनासो थियो। उल्लेखनीय छ, राज्यका एकमात्र सांसद पीडी राईले पनि हालै एउटा राष्ट्रिय समाचार एजेन्सीलाई दिएको एक अन्तरवार्तामा भनेका थिए-‘प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको करिश्मा अब धमिलो हुँदै गइरहेको छ। यदि विपक्षी दलहरूको महागठबन्धनले आकार लियो भने 2019 मा सत्तामा फर्किन भाजपाका लागि निकै कठिन हुनेछ।’ यस्ता बयानले एसडीएफ पार्टी र भाजपाबीच बढ्दो दूरी र अन्तरविरोधतर्फ सङ्केत गरेको छ। मुख्यमन्त्री चामलिङ विपक्षी एसकेएम पार्टीप्रति पनि निकै वर्षिए। पार्टीको नाम नलिई उनले तर स्पष्टतः एसकेएमप्रति तीव्र कटाक्ष गरे। “14 दिसम्बरको दिन जोरथाङमा भट्टु र गुण्डा पार्टीले घोषणा गर्‍यो-‘लुटेर हुन्छ कि, कुटेर हुन्छ कि, मारेर हुन्छ, सरकार बनाउँछौं।’ जनताका स्वतन्त्रता र मौलिक अधिकारमाथि यो ठाड़ो चुनौती हो। यो अक्षम्य अपराध हो। सिक्किमे जनताको मानवता, चेतना र स्वतन्त्रतामाथि यो कठोर दमन हो। विश्वमा तानाशाहहरूले पनि यस्तो घोषणा गरेको छैन। पार्टीमा हुँदा नै यस्तो छ, सरकार बनाए के हुन्छ सिक्किमको हालत? अहिले ‘हाम्रो मान्छे होइन’ भन्दैछ। उनीहरूकै पार्टीको मञ्चबाट बोल्ने, उनीहरूकै मान्छेले ताली पिट्ने अनि अहिले होइन भन्ने? राजनीति विज्ञान हो, ढाँट होइन”,चामलिङले भने। एसकेएमका नेताहरू पीएस गोले, सोनाम लामाले पनि उक्त भाषणमा ताली पिटेको उनको भनाइको आशय थियो। ‘सिक्किममा गुण्डाराज र बाहिर मालिक भएको पार्टी सरकारमा आए सिक्किमे जनता आफ्नो घरभित्र नोकर’ हुनुपर्ने मुख्यमन्त्रीले मन्तव्य गरे। उनले भने,“कस्तो परिवर्तन भनेको-सिक्किम बिगार्ने, सिक्किमलाई नोकर बनाउने परिवर्तन? परिवर्तन राम्रोको लागि हुनुपर्छ। हाम्रो पार्टी परिवर्तनकामी पार्टी हो। 1994 मा पहिलो सरकार बनाउँदा हामीले के-के परिवर्तन गर्‍यौं, जनताले थाहा गर्नुपर्छ। त्यसपछि दोस्रो, तेस्रो, चौथो र पाँचौं सरकारमा हामीले ल्याएको परिवर्तनले आज सिक्किम देशले मानेको र विश्वले जानेको राज्य बनेको छ। अब छैटौं सरकारमा हामी सिक्किमलाई विश्वकै एक श्रेष्ठ राज्य बनाउनेछौं। हामी निरन्तर परिवर्तनका पक्षधर हौं।”
विपक्षी पार्टीका एक नेताले ब्युरोक्रेट्सहरूलाई ‘भ्रष्ट’ बताएर अब चन्दा माग्न घरमै आउने भनी दिएको चेताउनीको जिकिर गर्दै मुख्यमन्त्रीले राज्यका नोकरशाहहरूसमक्ष भने,“ब्युरोक्रेट्सलाई भ्रष्ट बताएर तपाईंहरूको शिर ढाल्यो। सरकारमा नगई पार्टी चलाउँदै यस्तो घोषणा गर्छ भने सरकार हातमा परे महिनावारी उठाउँछ-मणिपुर र नागाल्याण्डमा जस्तो 10 प्रति चन्दा उठाउँछ। मैले अहिलेसम्म अवैध बिल बनाउन लगाएको छैन। झूटो बिल बनाउन लगाएको छैन। कुनै कर्मचारी मेरो समयमा जेल जान परेको छैन। भट्टुहरूका हातमा सरकार गयो भने ब्युरोक्रेट्स सबैभन्दा बढ़ी प्रभावित हुन्छ।” सिक्किममा ‘राजनीतिक आतङ्कवाद’ शुरु भएको मुख्यमन्त्रीको गम्भीर आरोप थियो।